बच्चाको हातगोडा दुखाइले हैरान हुनुहुन्छ ? कुन उमेरमा कति क्याल्सियम केबाट आपूर्ति गराउने ? – Public Health Concern(PHC)
in बाल स्वास्थ्य, मेरो स्वास्थ्य : मेरो सरोकार
डेरी उत्पादन, जस्तै, दूध, दही, चिजमा क्याल्सियम सबैभन्दा राम्रो पाइन्छ । सुन्तलाको जुस, चकलेट मिल्क, चाइनिज बन्दागोभी, चिप्ले भिन्डी, ब्रोकाउली, बदाम, माछालगायतमा पनि पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम पाइन्छ । बच्चाको उमेरअनुसार यस्ता खानामा जोड दिनुपर्छ । उमेरअनुसार बच्चालाई प्रतिदिन कुन परिमाणमा क्याल्सियम आवश्यक छ भन्ने कुराको जानकारी हुनु जरुरी छ ।सन्दर्भ सामाग्री
Tags: better to knowhealth info